भोलिको खेलबारे के भन्छन् कप्तान खड्का? (भिडियो) – Everest Dainik – News from Nepal
भोलिको खेलबारे के भन्छन् कप्तान खड्का? (भिडियो)
काठमाडौं, साउन ११ । सिंगापुरमा जारी आइसीसी टि–२० विश्वकप एसिया छनोट अन्तर्गत कुवेतविरुद्ध ७ विकेटले विजयी भएपछि अब नेपालले भोलि सिंगापुरविरुद्ध अन्तिम खेल खेल्दैछ । आज बलरले राम्रो खेलेको र ब्याटिङमा पनि सबैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा कुवेतलाई सजिलै हराएउनल सफल भएको कप्तान पारस खड्काले बताएका छन् । अब नेपालका लागि सिंगापुरविरुद्ध आइतबार हुने खेल नै मुख्य रहेको र त्यसका लागि टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान खड्काले बताए ।
उनले बलिङमा बसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेको योगदानको प्रशंसा गरे । विश्वकप छनोट खेल्ने नेपालको सपना पूरा गर्न सिंगापुर वरुद्धको खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पारसले ‘बेस्ट क्रिकेट’ खेल्ने बताए । सिंगापुर टिम पनि बलियो रहेको र उसको होम मैदान रहेकाले टिमले पनि त्यहीअनुसारको योजना बनाएर खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले अहिलेसम्म बेस्ट अफ् द बेस्ट क्रिकेट खेलेका छैनौ, त्यो खेल सिंगापुरविरुद्ध देखाएमा विश्वकप छनोटको अन्तिम चरणमा पुग्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’, कप्तान पारसले भने । आइतबारको खेलमा सिंगापुरलाई हराएमा नेपाल टी–२० विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनोटमा पुग्नेछ ।
ट्याग्स: नेपाल भर्सेस सिंगापुर, पारस खड्का